Italy Inowedzera Rondedzero Yezviitiko Zvinoda Vaccination Pass
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Italy Kuputsa Nhau » Italy Inowedzera Rondedzero Yezviitiko Zvinoda Vaccination Pass
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Culinary • tsika nemagariro • dzidzo • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Kodzero Dzevanhu • Italy Kuputsa Nhau • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Italy Inowedzera Rondedzero Zviitiko Zvinoda Vaccination Pass
Iyo Green Pass ichave inomanikidzwa kune vadzidzisi, vadzidzi veyunivhesiti, uye vanhu vanofamba vachishandisa nzira refu-refu yekufambisa yeruzhinji kubva munaGunyana 1.
Green Pass yeItaly idhijitari kana pepa gwaro rinoratidza kana mumwe munhu akagashira kanenge kamwe chete jekiseni rekudzivirira COVID, akaedza asina, kana apora kubva kuhutachiona.
Iyo ID yakave inomanikidza nzvimbo zhinji dzebhizimusi netsika nemusi wa6 Nyamavhuvhu.
Mabhizinesi kuregeredza kuteedzera mutemo anogona kukonzera faindi kune vese vatengi nenzvimbo dzinotangira kubva ku400 kusvika € 1,000.
Vakuru veItari vakazivisa kuti hurumende yenyika yawedzera rondedzero yezviitiko zvenguva dzose izvo zvino zvinoda humbowo hwejekiseni reCOVID-19 kana chimiro chisina kunaka checoronavirus.
Parizvino chiziviso, Green Green yeItaly zvichave zvinomanikidzwa kune vadzidzisi, vadzidzi veyunivhesiti, uye vanhu vanofamba nenzira refu-refu dzevanhu kubva muna Gunyana 1.
Gurukota rezvehutano reItaly, Roberto Speranza akati danho rekuwedzera mutemo wekushandisa kuzvikoro nekutakura vanhu rakagadzirirwa "kudzivirira kuvharwa uye kuchengetedza rusununguko."
Green Pass idhijitari kana pepa gwaro rinoratidza kana mumwe munhu akagashira kana imwe chete dosi yevhavha yeCOVID-19, akaedza asina, kana kuti apora kubva kuhutachiona hwekoronavirus, uye yakafanana nechitupa chehutano chakaburitswa nguva pfupi yadarika neFrance .
Iyo Green Pass yakave inomanikidzwa kumabhizimusi mazhinji eItaly nenzvimbo dzetsika, kusanganisira mamiziyamu, nhandare, mabhaisikopo, majimu uye nzvimbo dzekugara dzemumabhawa neresitorendi, musi waAugust 6.
Kukundikana kumisikidza mirau mitsva kunogona kukonzera muripo kune vese vatengi nenzvimbo dzinotangira pa € ​​400 kusvika pa1,000 ($ 470 kusvika $ 1,180). Masangano anogara achityora chirongwa ichi achivharwa nezviremera kwemazuva gumi.
Mutungamiriri weItari, Mario Draghi atora matanho akasimba ekuwedzera nhomba yeECVID-19 uye kumhanya munyika yake. Muna Kurume, mutungamiri wehurumende akaraira kuti jab riitwe rekumanikidza kune vese vashandi vehutano. Hurumende yakabhadharisa danho rehutano senzira yekuwedzera nhanho dzekudzivirira.
Italy yakanyoreswa 27 vakafa coronavirus-yakabatana neChina, ichienzaniswa ne21 nezuro wacho, Ministry of Health yenyika yakashuma, nepo huwandu hwevanhu vatsva hwakakwira kusvika pa7,230 6,596 kubva paXNUMX. Italy nedzimwe nyika dzakawanda vakanongedzera kune inoparadzaniswa misiyano yeDelta kururamisa nharo dzayo nyowani dzekudzora.